Ogaden News Agency (ONA) – Q4aad – JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan ( Gogol-dhig: Uruka TPLF iyo Gumaadka shacabka)
Q4aad – JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan ( Gogol-dhig: Uruka TPLF iyo Gumaadka shacabka)
Posted by ONA Admin	/ October 6, 2014
Waxaan Q3xaad ee taxanahan kusoo qaadanay tusaalooyin aan filayo inay inagaga filnaadeen inaan ku muujino qorshayaashii uu cadawga u dajiyay inuu kula dagaalamo ururka ONLF, iyadoo hadafka gumaysiga uu ahaa siduu uga weecin lahaa ururka hadafkiisa ah inuu shacabkeena helo xaqqa ay u leeyihiin inay aayahooda si-madaxbanaani ah uga tashadaan. Iyo inuu ONLF ka dhigo urur u adeega danaha Itobiya oo la mid ah ururadii Somalida. Wuxuu ahaa qorshe ay Itobiya ku bixisay miisaaniyad xoog leh oy ka filaysay inuu muddo yar ka dib kala diri doono xubnaha JWXO iyo halganka ka socda dibadda ama gudaha. Ma odhanayno dhamaan xubnihii ururka uma liicin laaluushkii uu daadinayay gumaysiga, oo lagama waayo bani-aadamka qof u jilca balan-qaadyada beenta ah ee gumaysiga uu dadka ku ogaadhsado.
Waxaan qodobkan ku ifin doonaa siyaabahii kala duwanaa uu gumaysiga uu kula dhaqmay shacabkeena gude iyo dibadba iyo dhibaatooyinka uu gaadhsiiyay iyo gacamaha uu ku fuliyay dambiyada uu ka galay dadka shacabka ah een waxba galabsan.
Gogol-dhig : Ururka TPLF ee haysta dalka Itobiya, wuxuu ahaa urur soo maray halgan dheer oo naxariisdara ah, sidaa daradeed waxaa laga filayay, gaar ahaan qawmiyadihii kula dulmanaa xukunkii boqortooyada, inuu waaya aragnimadii uu ka dhaxlay dhibaatadii uu Mingisto u gaystey shacabka Tigreega uu ka faa’idaysan doono. Waxaa laga filayay ururka TPLF iyo Qawmiyadda Tigreega inaysan la mid noqonin xukunkii Mingisto oy tixgaliyaan rabitaanka shucuubtii ku dulmanayd Itobiyanimada, gaar ahaan shacabka Somalida Ogadenya oy si fiican ula socdeen taariikhdooda halgan, maadaama ay ku soo barbaareen Somaliya kana heli jireen taageerada ugu badan xukuumadii kacaanka ee Maxamad Siyaad Barre. Dareenka ah inay jiraan qawmiyado doonaya inay ka madax-banaanaadaan Itobiya ayaa saldhig u ahaa qodobadii ugu muhiimsanaa Cahdigii Ku-meel Gaarka ahaa ama (The Transitional Charter). Waxaa lagu muujiyay Cahdiga waxyaabihii ay tabanayeen qawmiyadahii xoogga lagu haystay, oo qawmiyadda Tigreega ay waagaa ka midka ahayd.
Xukuumadii Ku-meelgaar ahayd (Provisional Government) oo ka koobnaa ururka EPRDF wuxuu ku dhawaaqay shir loogu magacdaray Shirka Nabadda iyo Dimoqraadiyadda oy kasoo qaybgaleen Todobo iyo Labaatan Xisbiyadii iyo Ururadii hubaysnaa oo ka kala socday qawmiyadaha iyo shucuubta Itobiya ee kasoo horjeeday xukunkii Mingisto. Shirkaa oo hay’ado caalami iyo dawladaha qaarkood ay fadhiyeen waxaa lagu ogolaaday Cahdigii Ku-meel Gaadhka ahaa (Trnsitional Charter). Cahdiga waxaa si cad loogu xusay; Xoriyadda, Sinaanta iyo Aaya-katashiga Shucuubta inuu saldhig u yahay nidaamka siyaasi, dhaqaale iyo nolosha bulshada .. (The charter declared that “freedom, equal rights and self-determination of all peoples shall be the governing principle of political, economic and social life.”).
Waxaa kaloo lagu heshiiyay oo si cad loogu qoray cahdiga xaqqa ay umad/qawmiyad walba oo Itobiya ka mid ah u leedahay Aaya-katashiga ilaa heer go’itaan. Wuxuuna u qornaa sidan; Umad/Qawmiyad walba waxay xaq u leedahay inay ku dhaqaaqaan xaqqa ay u leeyihiin inay aayahooda madaxbanaani kaga tashadaan, hadii umadaa/qawmiyadaa iyo shacbakaa uu u arko in xuquuqdoodii loo diiday, la duudsiyay ama la baab’iyay; (c- exercise it’s right to self-determination of independence, when the concerned nation/nationality and people is convinced that the above rights are denied, abridged or abrogated.)
Sababta ugu weyn ee loo adkeeyay qodobadaa lagu ilaalinayo xaqqa aaya-katashiga qawmiyadaha, marka laga yimaado inuu yahay qodob ay dhamaan dawladaha caalamka ogolaadeen oy saxiixeen inay tixgalinayaan markay ku biirayeen Qaramada Midoobay, waxay ahayd iyadoo ay isla qireen 27kii Xisbi iyo Urur ee shirkaa fadjiyay in sida kali ah ee nabadgalyada shucuubta wada dagan khariidada Itobiya ay tahay in xaqqaa aaya-katashiga uu noqdo mid muqadas ah oo aan qawmiyadna lagu jajuubin kamid ahaanshaha dawladda Itobiya, oo la tixgaliyo hadday doonayaan oy aqlibiyadda shacabkaasi isku raaco inay ka baxaan Itobiyanimada. Taasoo hadday dhacdo, oo Qawmiyadaasi lagu jajuubo wax aanay raali ka ahayn, keenaysa inay qawmiyadaasi dareento dulmi in lagu hayo oy ka dagaalanto markasta oo ay u duruufta u suurtagaliso. Waxaa kaloo ka mid ahaa cahdigaa lagu heshiiyay qodobo muhiim ah sida Ilaalinta Xuquuqda Qofka iyo Sinaanta qawmiyadaha iyo kuwa kale oo lagu xardhay Dastuurka loo qoray Itobiya.
Shan sano kama soo wareegan markay xukunka qabsadeen TPLF oy noqdeen koox budhcadnimo ku xukunta dalka oo aan ogolayn inuu ku noolaado dalkiisa shaqsi ka madaxbanaan oo diidi kara barnaamijka qawmiyadda Tigree iyo amarka kasoo baxa ciidankii Wayaanaha oo noqday Ciidanka rasmiga ah ee Itobiya. Hordhacaa yar ka dib;
Waxaa xusuusta Dadweynaha Somaliyeed ee Ogadenya aan waligeed ka bixi doonin in dhibaatadii ugu badnayd ee Itobiya ay u gaysatay shacabkeena tan iyo markuu kusoo duulay Minilik, ay u gaysteen xukunka hadda haysta dalka Itobiya. Horey uma dhicin umana dhici doonto inuu soo maro dalka Ogadenya xukun uga dhibaato badan shacabkeena xukuumadda TPLF/EPRDF. Maxay tahay sababtu?
Sidaan horey kusoo sheegnay, nimanka xukunka qabsaday waxay ahaayeen jabhad dagaal hubaysan ku qabsatay dalka, oo waliba ahaa urur shuuci ah ah oo qofka aadanaha ah aanu agtiisa qiimi ka lahayn suu u gaadho hadafkuu lahaa, kuna shaqaysta mabda’a intihaasinimada (Machiavellian). Taariikhdii uu soo maray ururkan oo ah mid ku dhisnayd maafiyanimo oo xataa ururka dhexdiisa uu dhiig badan ku daadatay waxay ku dhalisay cuqdad joogta ah inay u arkaan ururkasta mid lid ku ah jiritaankooda, oo ay ku tala galaan inay baabi’yaan (Annihilation), ma’aha inay wada noolaadaan ama wadahadal lagalaan oy fahmaan waxay ka biya-diideen.
Arinta inay sidaa tahay waxay ka muuqataa doodii dhex martay Safiirka Mareykanka Mr. Yamamaato iyo Meles Zinawi. Markuu Safiirka kala hadlay Meles arinta cuna-qabataynta Ogadenya uu saaray iyo dhibaatada ka soo gaadhay shacabka, jawaabta uu siiyay Meles ee Safiirka usoo diray wasaaradda Arimaha Dibadda waxay ahayd; Su’aalaha R/wasaaraha waxaa ka muuqatay siday Itobiya uga niyad jabsantahay hawlaha ka socda Ogadenya, fal-celintoodana waxay noqotay inay joojiyaan xogta laga helayo dalkaa oy is-diidsiiyaan eedaha loosoo jeedinayo. Wuxuu Safiirka ka codsaday inuu Istraatiijyad furan kula dhaqmo saxaafadda iyo bulshada gudaha oo dadweynaha u sharxo waxay ka wadaan Ogadenya iyo hadafka ay ka leeyihiin, iyo inuu fiiriyo cabashada oo aanu si dhibyar isaga dhaga marin ..
(The Prime Minister’s questions reflect Ethiopia’s irritation and frustration over their actions in the Ogaden, and their reaction has been to hold information and deny charges. Ambassador urged the Prime Minister to pursue a more open strategy with the press and international community by explaining to the public their activities and goals in the Ogaden, and to address concerns raised rather than to simply ignore or deny charges.)
Qaybihii hore waxaan kusoo sheegnay inay Itobiya ku talagashay, caalamkana ogaysiisay inay si dhaqsa ah usoo afjari doonto waxa ka socda Ogadenya iyo jiritaanka ururka ONLF, lagana aamuso mudadaa yaree ay wadaan ololaha dhibaatada soo gaadhaysa shacabka. Istraartiijiyada ciidanka Itobiya wuxuu ahaa inay dagaalka ugu badan shacabka ku qaadaan. Istraatiijiyadan waxay kazoo minguuriyeen dagaalkii uu Mingisto ku qaaday gobolka Tigree. Istraatiijiyadan oo loogu yeedho; Biyaha ka Madhi Baliga Saad usoo Qabato Kaluunka (Drain the pond to catch the fish), waxaa adeegsada dhamaan gumaysiga iyo xukuumadaha macangaga ah ee Nolosha qofka iyo umadaba ay ku xidhan tahay joogitaanka Kaligii-taliyaha xukuma. Itobiya kolba midka xukuma wuxuu kula dhaqmaa siyaasadaa ah adoonsiga ogolow ama dhimo. Shacabka Somaliyeed ee Ogadenya oo diidanaa adoonsiga Itobiya halgan adagna kula jiray xukuumadihii Adisababa iska bad-badalayay, waxay la kala kulmeen xukuumadda Tigree gumaad iyo xad-gudub aan horey usoo marin oo gacma kala duwan ay fulinayeen.
Qaybaha dambe ayaan kaga faaloon doonaa dambiyada laga galay shacabka iyo cidda fulisay iyo halganka ka socda Gudaha iyo Dibadda heerka uu marayo. La socda.